Fandehanana fanamafisana ny induction -Nahoana mampiasa fanamafisana ny induction
Dingana fanolorana ny induction
HLQ Induction dia mpitarika ao serivisy fanorana Ny fanindronana induction dia ahafahana mifehy tsara sy azo antoka ny fananana vy. Ny fampidirana an-tsindrona induction dia ampiasaina indrindra amin'ny fampidirana an-tany malefaka sy fanalefahana, manome tombony lehibe noho ny fomba mahazatra. Ny fampidirana an-tsindrona induction dia ahafahan'ny fanesorana ny loto mandritra ny fanakilehana mamiratra. Ny fampidirana an-tsindrona induction dia ampiasaina indrindra amin'ny fampidirana annealing malefaka sy ny fanalefahana ny fihenjanana ary manome tombony lehibe kokoa noho ny fomba mahazatra.
Induction Annealing dia fitsaboana hafanana vy izay ahitan'ny fitaovana metaly amin'ny mari-pana miakatra mandritra ny fotoana maharitra ary avy eo mangatsiaka tsikelikely. Ny fametahana dia miavaka indrindra amin'ny fiovan'ny rafitra mikraoba izay tompon'andraikitra amin'ny fanovana ny toetran'ny mekanika. Ny tanjona faratampony amin'ity dingana ity dia ny hampihenana ny hamafin'ny metaly sy hanatsara ny fivelarana.
Ny serivisy fanoloana dia manondro manokana ny fizotrany amin'ny famoahana ireo fitaovana ireo. Ny dingana ataontsika dia manalefaka ny metaly fa tsy tanteraka araka izay azo atao. Ny haavon'ny fahatezerana dia miankina amin'ny fitaovana, ny mari-pana farany indrindra ary ny halavan'ny fotoana mangatsiaka. Ny fomba na ny fanelingelanana ny fanamaivanana dia ampiasaina hanaratsy ny vokatry ny asa mangatsiaka; izany hoe hanalefaka sy hampitombo ny fahaleovan'ny metaly izay mafy hatoka teo aloha. Ny adin-tsaina anaty dia mety hivoatra noho ny fanodinana fanodinana plastika toy ny fikorotanana na fikosoham-bary, ny fikatsahana fanamiana tsy misy fanamiana amin'ny dingam-panodinana na fandefasana, na fiovana fiovana. Mety hitranga ny fanavakavahana sy ny ady raha tsy esorina ny fihenjanana anatiny. Hanafoana ireo fihenjanana ireo ny fanaingoana rehefa mafana ny ampahany amin'ny mari-pana atokana, atao lava ao ary mihena tsimoramora amin'ny mari-pana amin'ny efitrano.
Nahoana no mampiasa fanamafisana?
Ny fanamafisana induction maoderina dia manome tombony betsaka amin'ny fomba fanafanana hafa ary matetika ampiasaina amin'ny fampiharana annealing. Ny fanafanana amin'ny alàlan'ny fampidirana dia manome hafanana azo antoka, azo averina, tsy mifandray ary tsy misy angovo amin'ny fotoana kely. Ny rafitra fanjakana mafy orina dia mahavita manafana faritra tena madinidinika ao anatin'ny fandeferana amin'ny famokarana mazava, nefa tsy manelingelina ny toetra metallurgical tsirairay. Ny induction dia azo ampiasaina na amin'ny ambony na amin'ny alàlan'ny fanamainana; tranga annealing azo atao arakaraka ny fotoana, ny mari-pana sy ny toetran'ny fitaovana.
Ny fanalefahana ny induction dia teny ankapobeny miresaka momba ny fanafana ny metaly amin'ny mari-pana voafaritra ary avy eo dia mangatsiaka amin'ny hafainganam-pandeha izay hamokatra microstruktur voadio. Ny fampiasana Induction, ny metaly dia mety hafanaina haingana amin'ny mari-pana amin'ny fifehezana tsingerim-miverimberina tsy misy fifandraisany amin'ny kendrena metaly na manafana ny habakabaka manodidina azy. Ny fatana mangatsiatsiaka amin'ny metaly ferrous dia matetika amin'ny rivotra tsy misokatra ka miteraka perla. Ny metaly tsy ferrous, varahina na varahina toy izany, dia mety iharan'ny fanaintainana haingana amin'ny alàlan'ny famonoana rano. Ny vokatra dia “manalefaka” ilay fitaovana ary manamboatra azy mora kokoa amin'ny endrika takiana.
Induction Annealing matetika ampiasaina amin'ny fanodinana tariby, fametrahana fitaovana fametahana, ary fampiharana fika amin'ny fantsona. Fitaovana mahazatra ho an'ny fanalefahana ny induction dia aluminium, karbonina ary karbonina. Ny sasany amin'ireo tombony azo amin'ny fanalefahana ny Induction dia: hery mitaky; haingam-pandeha haingana; ny famongorana ny hery mitohy mankany amin'ny faritra hafanana lehibe (izany hoe lafaoro); fitehirizana ny vidiny noho ny fihenan'ny herinaratra; ny fangatahana mivantana ny metaly fa tsy ny rivotra ambient tahaka ny amin'ny dingana convection; Ny dingana azo antoka kokoa noho ny fomba fandoroana lelafo; fanaraha-maso ny fanatsarana na dia ny fanorana sy ny fanorana mitovy amin'ny hafanana manome tsy miankina amin'ny fahaizan'ny mpandraharaha
Fa maninona no misafidy ny fanamafisana HLQ ho an'ny fanalefahana ny induction?
Lehiben'ny indostria izahay amin'ny fametrahana ny induction miaraka amin'ny birao any Chine.
Induction fanasitranana dia fitsaboana mafana amin'ny alàlan'ny hafanana induction, hafana ny metaly ho an'ny mari-pana voafaritra ary avy eo ny hatsiaka amin'ny hafainganam-pandeha izay hamokatra microstruktur voadio. Mampiasa ny hafanana Induction, ny metaly dia mety hafanaina haingana amin'ny mari-pana amin'ny fanodinana ireo tsingerim-potoana miverimberina tsy misy ifandraisana amin'ny kendrena metaly, mazàna ny rivotra entin'ny rivotra iainana. Ny vokatra dia “manalefaka” ilay fitaovana ary manamboatra azy mora kokoa amin'ny endrika takiana.
Ny tombony azo avy amin'ny famahana amin'ny induction:
1. Ny tahan'ny famokarana avo
2. Faritra hafanana kely kokoa ary tsy filàna herinaratra tsy tapaka (izany hoe lafaoro)
3. Mitahiry ny vidiny noho ny fampitomboana ny famokarana sy ny fihenan'ny asa
4. Mora mifehy ny mari-pana sy ny hafanana
Satria izahay manokana amin'ny fanavotana induction, dia mahazo tombony amin'ny varotra fampiasa amin'ny indostrian'ny indostria ny mpanjifa.
Ny mpanjifanay dia misoroka ny famoronana be loatra sy ny fitantanana ny ampahany amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fanabeazana ny induction, izay miteraka fako kely sy fanatsarana valiny amin'ny vidiny ambany.Manana tranokala sy fitaovana ary fitaovana famokarana ambony indrindra izay manana ny fenitra ambony indrindra.